မကျြနှာပျေါက အမဲစကျ တငျးတိပျတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး – Cele Lover
မကျြနှာပျေါက အမဲစကျ တငျးတိပျတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး
တငျးတိတျ ပြောကျခငျြလား သံပုရာသီး နဲ့ အုနျးမုတျခှကျ သှေးလိမျးပါ လကျတှပေ့ါ ။ အုနျးမုတျ ခှကျ သာ သကျသေ ကွညျ့ တော့ ။သံပုရာသီး မသုံးပဲ အုနျးမုတျခှကျပဲ သှေးလူး ပါက သုံးခါလောကျ လူးပွီး မကျြနာပွငျခြောမှေ့ လာမညျကို လကျတှေ့ သိရ ပါလိမျ့မညျ ။ ။“လူသိနညျးသော အုနျးမုတျခှကျဆေးနညျးမြားအခု ပွောပွမယျ့ ခှကျကလေးက အုနျးမှုတျခှကျ လေးအကွောငျးပါ ။ဖတျဖူးသမြှ နဲ့ ကိုယျတှေ့ ဆေးဖကျ ဝငျတဲ့ အုနျးမှုတျခှကျ အကွောငျးလေးပါ ။
အညာဒသေရဲ့ ရှာတှငျး ရှာပွငျ ပွယုဒျ တဈခု ဖွဈတဲ့ ခစျြ့စရာ့ ဓလတှေ့ေ ဟာ…ပြောကျကှယျလု နီးပါး ဖွဈနေ ပါပွီ ။ရခေမျြးစငျ မှာ သောကျရခှေကျ အဖွဈ အမြား အားဖွငျ့ အသုံးပွု ကွတာ ကတော့ အုနျးမှုတျ ခှကျ ပါ ။အိုးမှုတျခှကျ ကို အသခြော အခြော ကိုငျ ၊ ခှကျ နားစှနျး တဖကျတခကျြ မှာ အပေါကျပွီး လကျကိုငျရိုး ကို တတျ ထားပါ တယျ ။အခှံ မပါ ၊ အမှေး မပါ ခှဲထားပွီး ၊ အသား ၊ အဆနျ ထုတျထားပွီး ၊ လှငျ့ပဈ ထားသောအုနျးမှုတျခှကျ အခှံကို ဆိုလို ပါသညျ ။
“ဆေးနညျး တဈမြိုးကတော့” – အုနျးမှုတျခှကျ တဈခုကို ရဆေေး နလှေမျးပွီး ပါက မီးရှို့ပါ ။ ထှကျလာသော အငှကေို့ သနျ့သော ဒနျ ၊ သတ်ထု အဖုံး တဈခုခုဖွငျ့ မှိုငျးခံပါ ။( တဈခြို့ကတော့ ဓါးမကွီး တဈခြောငျးပျေါမှာ တငျပွီး လုပျပါတယျ မွနျမာနညျး ပေါ့ )အညိုရောငျ အဆီမြား ကပျလာပါမညျ ။ပှေးကို သနျ့သော ပစ်စညျး တဈခုဖွငျ့ ခွဈပါ ။အပျေါယံ အရပွေား ပှနျးသှားပါက ၊ အုနျးမှုတျခှကျ အဆီကို ခွဈယူပွီး သုတျပေးပါ ။အနညျးငယျ စပျပွီး ပြောကျပါသညျ ။ ( ပှေးရောဂါ လကျတှေ့ ပြောကျပါသညျ )“ နောကျတဈနညျး ကတော့ ”
“ တကယျ အသုံးဝငျတဲ့ မိတျကပျ တဈမြိုးပေါ့ “အပြိုဖျော ဝငျကာစ လူပြို အပြိုလေးတှေ နဲ့ မကျြနှာမှာ အဖုအထဈတှေ နဲ့ လကမ်ဘာ အလား အစကျအပွောကျတှေ ထူလပွဈ နဲ့ နဂို ရုပျခံကိုပကျြစီး စတေဲ့ ဝကျခွံ တငျးတိတျ နလေောငျနာတှေ အတှကျ … …ရကျ တိုတို အတှငျး ပြောကျကငျး ခြောမှတျ နေ စေ ဖို့ အုနျးမှုတျခှကျ အရငျ့ တဈလုံး ကို သှေးပွီး သနပျခါး လိမျးသလို ညတိုငျး လိမျးအိပျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ ။အုနျးမှုတျခှကျ ဆိုပွီး လြှော့တော့ မတှကျလိုကျပါနဲ့ ၊ လိမျးထားလို့ ခွောကျသှားရငျ သနပျခါး နဲ့ မခွားပါဘူး လကျလေးနဲ့ အသာပှတျကွညျ့ လိုကျ ခြောမှတျနတေဲ့ အထိအတှကေ့ . . . ဆကျမပွောတော့ဘူး လိမျးဘူးတဲ့သူတှသော မေးကွညျ့ ပါတော့
မျက်နှာပေါ်က အမဲစက် တင်းတိပ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
တင်းတိတ် ပျောက်ချင်လား သံပုရာသီး နဲ့ အုန်းမုတ်ခွက် သွေးလိမ်းပါ လက်တွေ့ပါ ။ အုန်းမုတ် ခွက် သာ သက်သေ ကြည့် တော့ ။သံပုရာသီး မသုံးပဲ အုန်းမုတ်ခွက်ပဲ သွေးလူး ပါက သုံးခါလောက် လူးပြီး မျက်နာပြင်ချောမွေ့ လာမည်ကို လက်တွေ့ သိရ ပါလိမ့်မည် ။ ။“လူသိနည်းသော အုန်းမုတ်ခွက်ဆေးနည်းများအခု ပြောပြမယ့် ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက် လေးအကြောင်းပါ ။ဖတ်ဖူးသမျှ နဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဆေးဖက် ဝင်တဲ့ အုန်းမှုတ်ခွက် အကြောင်းလေးပါ ။
အညာဒေသရဲ့ ရွာတွင်း ရွာပြင် ပြယုဒ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ချစ့်စရာ့ ဓလေ့တွေ ဟာ…ပျောက်ကွယ်လု နီးပါး ဖြစ်နေ ပါပြီ ။ရေချမ်းစင် မှာ သောက်ရေခွက် အဖြစ် အများ အားဖြင့် အသုံးပြု ကြတာ ကတော့ အုန်းမှုတ် ခွက် ပါ ။အိုးမှုတ်ခွက် ကို အသေချာ အချော ကိုင် ၊ ခွက် နားစွန်း တဖက်တချက် မှာ အပေါက်ပြီး လက်ကိုင်ရိုး ကို တတ် ထားပါ တယ် ။အခွံ မပါ ၊ အမွှေး မပါ ခွဲထားပြီး ၊ အသား ၊ အဆန် ထုတ်ထားပြီး ၊ လွှင့်ပစ် ထားသောအုန်းမှုတ်ခွက် အခွံကို ဆိုလို ပါသည် ။
“ဆေးနည်း တစ်မျိုးကတော့” – အုန်းမှုတ်ခွက် တစ်ခုကို ရေဆေး နေလှမ်းပြီး ပါက မီးရှို့ပါ ။ ထွက်လာသော အငွေ့ကို သန့်သော ဒန် ၊ သတ္ထု အဖုံး တစ်ခုခုဖြင့် မှိုင်းခံပါ ။( တစ်ချို့ကတော့ ဓါးမကြီး တစ်ချောင်းပေါ်မှာ တင်ပြီး လုပ်ပါတယ် မြန်မာနည်း ပေါ့ )အညိုရောင် အဆီများ ကပ်လာပါမည် ။ပွေးကို သန့်သော ပစ္စည်း တစ်ခုဖြင့် ခြစ်ပါ ။အပေါ်ယံ အရေပြား ပွန်းသွားပါက ၊ အုန်းမှုတ်ခွက် အဆီကို ခြစ်ယူပြီး သုတ်ပေးပါ ။အနည်းငယ် စပ်ပြီး ပျောက်ပါသည် ။ ( ပွေးရောဂါ လက်တွေ့ ပျောက်ပါသည် )“ နောက်တစ်နည်း ကတော့ ”
“ တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ မိတ်ကပ် တစ်မျိုးပေါ့ “အပျိုဖော် ဝင်ကာစ လူပျို အပျိုလေးတွေ နဲ့ မျက်နှာမှာ အဖုအထစ်တွေ နဲ့ လကမ္ဘာ အလား အစက်အပြောက်တွေ ထူလပြစ် နဲ့ နဂို ရုပ်ခံကိုပျက်စီး စေတဲ့ ဝက်ခြံ တင်းတိတ် နေလောင်နာတွေ အတွက် … …ရက် တိုတို အတွင်း ပျောက်ကင်း ချောမွတ် နေ စေ ဖို့ အုန်းမှုတ်ခွက် အရင့် တစ်လုံး ကို သွေးပြီး သနပ်ခါး လိမ်းသလို ညတိုင်း လိမ်းအိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။အုန်းမှုတ်ခွက် ဆိုပြီး လျှော့တော့ မတွက်လိုက်ပါနဲ့ ၊ လိမ်းထားလို့ ခြောက်သွားရင် သနပ်ခါး နဲ့ မခြားပါဘူး လက်လေးနဲ့ အသာပွတ်ကြည့် လိုက် ချောမွတ်နေတဲ့ အထိအတွေ့က . . . ဆက်မပြောတော့ဘူး လိမ်းဘူးတဲ့သူတွေသာ မေးကြည့် ပါတော့
Previous Article ပရိတျသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှု့တှခေံလိုကျရတဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျ
Next Article အနှေးယာဉျလုပျသားမြားရဲ့ အိမျ ထောငျစု(၁၀၀) စာအတှကျ စားနပျရိက်ခာမြား သှား ရောကျ လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ခနျ့စညျသူ